Ungayongeza njani i-Instagram kwiTik Tok | I-RoidHub
»Uyongeza njani i-Instagram kwiTik Tok
Ungayongeza njani i-Instagram kwiTik Tok
4.4 / 5 ( 73 iivoti )
I-Instagram yayiyindawo yokuqala yesizukulwana esitsha kude kube yilapho u-TikTok craze asusa eso sihloko. Ngaba uyazi ukuba iprofayile ye-Instagram inokongezwa kwiakhawunti yakho yeTikTok? Ke siza kukuxelela indlela yokongeza i-Instagram kwiTik Tok.
Awona maqonga mabini abamba umdla kulutsha lwelo xesha athwale ezinye iikhonkco ezithile ezikhethekileyo kwiqonga ngalinye. Nganye inempawu zayo kunye namandla ayo. Ukuba uthatha isigqibo sokuncama omnye ukwenzela abanye. Kukho amathuba amahle okuba uphosa kakhulu ngokungasebenzisi enye.
Ungayongeza njani i-Instagram kwiTik Tok?
Ungayidibanisa njani i-Akhawunti yesibini okanye yeShishini le-Instagram kwiTikTok
Ungayikhupheli ku-Instagram i-TikTok
I-TikTok yeyona ndlela yokuhamba kwiividiyo ezimfutshane nezibambekayo. Ezi ziqwengana zimnandi kwaye ziyazonwabisa kwaye kulula ukuzenza kunye nokuzifaka kwi-app.
Isicelo sithwala zonke iintlobo zomxholo kwaye sikuvumela ukuba wonwabe nangaliphi na ixesha ngomjelo ongapheliyo weziqeshana ezimangalisayo nezihlekisayo. Konke ngokokuthanda kwakho kunye nokuthandayo.
Nangona i-Instagram ifike ngaphambili kuneTik Tok. Kulandela ifilosofi eyahlukileyo yokuyila umxholo kunye nokwabelana. Ngomfanekiso wayo omangalisayo kunye neefilitha zevidiyo. Iseyona qonga le-premium yophuhliso lomxholo kunye nokwabelana.
Kodwa iTikTok iyodwa ngokwaneleyo ukugcina uzibophelele ixesha elingapheliyo. Nangona kunjalo, abantu bafuna ukunika ixesha kwi-Instagram yabo. Ke ukuba nawe ubuza “Ndiyidibanisa njani i-Instagram yam kwi-TikTok yam?
Siza kukuthatha kwinkqubo. Yiba yifowuni yakho ephathekayo okanye isixhobo okanye iapile oyiphetheyo. Impendulo yendlela yokongeza i-insta kwi-tik tok ilula.
Ungaziqhagamshela zombini iiapps. Abanye abantu phaya sele besebenzisa i-TikTok app ukwenza amabali e-Instagram kunye neziqendu zemeko. Nangona kunjalo, uninzi aluyazi inyani yokuba zombini ezi nkqubo zinokuqhagamshelwa ngqo kwiqonga leTik Tok.
Ngaphambi kokuba uqalise ukudibanisa iiakhawunti kwezi zicelo zimbini. Kuya kufuneka wazi ukuba zizicelo ezimbini ezahlukileyo ezizezakho kwaye zisebenza ziinkampani ezahlukeneyo. I-Insta ingumnini we-Facebook kwaye iTik Tok yinkampani yase China.
Ukuze udibanise i-Instagram kunye neTikTok, kuya kufuneka ufake zombini usetyenziso kwifowuni yakho. Kuba ulapha. Sele unazo zombini iiakhawunti. Ngoku ukulungele ukuya kwinkqubo. Ke nantsi indlela yokudibanisa i-Instagram kwiTikTok.
La ngamanyathelo. Benze ngokulandelelana okunikiweyo kwaye uya kuba akukho xesha.
1 Vula usetyenziso lweTik Tok kwaye ucofe kwi icon yephrofayili. Kuku kwikona esezantsi ngasekunene xa usetyenziso lwakho luvuliwe kwiscreen sakho.
2 Ngoku cofa kukhetho lweprofayili yokuHlela wakuba udlulele kwinqanaba lokuqala.
3 Apha ungabona ukhetho lokongeza iiprofayile zakho ze-Instagram kunye ne-YouTube. Thepha kwithebhu ye-Instagram.
Ngoku uya kusiwa kwi-Instagram Login yakho. Gcwalisa iziqinisekiso ezibandakanya inombolo yakho yefowuni, igama lomsebenzisi, okanye i-imeyile kunye negama lokugqitha. Emva koko cinezela isithuba sokungena. Uya kusiwa kwiprofayile yakho ngeTikTok.
Ngoku cofa kwi "Gunyazisa" ukhetho ukuvumela iakhawunti yakho ukufikelela kwi-akhawunti ye-Insta.
Le yindlela yokongeza i-insta kwi-tik tok kwifowuni yakho ephathekayo. Ngoku ungabelana ngendalo yakho yevidiyo kwifowuni yakho ngqo kwi-Insta evela kwi-TikTok app. Akukho sidingo sokuhamba kwindlela ende eguqukayo yokutshintsha phakathi kwezicelo zombini.
Ungayenza le nto. Abantu abazama ukudibanisa i-akhawunti yabo ye-Instagram okanye ii-akhawunti zabo ze-Instagram yesibini banokujongana neengxaki ezithile. Eyona ixhaphakileyo yeyiphi ingxaki ephosakeleyo yephasiwedi. Kulula ukuyilungisa. Ukwenza oku, indlela inamanyathelo alula alandelayo.
Yiya kwi-Akhawunti yakho yesibini okanye yeshishini kwi-Instagram yakho.
Thepha 'Yenza iphasiwedi kule akhawunti' ukhetho
Nika igama eligqithisiweyo kule akhawunti.
Ngoku sebenzisa ezi ziqinisekiso ukunxibelelana kwi-Instagram ukusuka kwiTikTok. Ke le yindlela yokudibanisa i-Instagram kunye neTikTok evela kwishishini okanye kwi-akhawunti yesibini ye-Instagram.
Ngasiphi na isizathu sokuba ufuna ukwahlula iiakhawunti ezimbini kufuneka wenze ntoni? Kule meko, kuya kufuneka uphinda inkqubo ekhankanywe kwimeko yokuqala.
Apha endaweni yokucinezela u- "Yongeza i-Instagram" ukhetho. Kuya kufuneka ucofe iqhosha u- "Unlink". Ke usetyenziso lwe-TikTok luya kuzicima ngokuzenzekelayo iinkcukacha zakho ze-Instagram.
Ke ngokusebenzisa la manyathelo indlela yokongeza i-Instagram kwiTik Tok iba ngumsebenzi olula. Yenza ngoku kwaye wenze ubomi bakho bube lula.
Ndiyifaka njani i-Instagram yam kwi-TikTok yam
Ungayongeza njani i-Insta kwiTik Tok
Ungayongeza njani iAkhawunti yeShishini le-Instagram kwiTikTok
Ungayongeza njani i-Instagram kwiTikTok
& Health Fitness (6)
imidlalo yokuzonwabisa (119)
Ukudlala indima (5)